Jesse Lingard oo iska diiday heshiis kordhin cusub oo ay u soo bandhigtay Kooxdiisa Manchester United – Gool FM
(Manchester) 08 Sebt 2021. Jesse Lingard ayaa la soo warinayaa inuu iska diiday fursad uu ku kordhin karay sii joogtisiisa Kooxda kubadda cagta Manchester United.
Xiddiga xulka qaranka England ayaa si xoog leh loola xiriirinayey inuu si joogto ah ugu dhaqaaqi doono West Ham United suuqii xagaaga, kaddib markii uu sagaal gool u dhaliyey, isla markaana abuuray shan kale 16 kulan oo uu saftay Kooxdaas intii lagu jiray xilli ciyaareedkii amaahda ahaa ee uu ku sugnaa.
Si kastaba ha ahaatee, ma noqon inuu Lingard ku soo laabto garoonka London Stadium, kaasoo hadda isku dayaya inuu kula tartamo Cristiano Ronaldo iyo Jadon Sancho boosaska weerarka ee Kooxda Tababare Ole Gunnar Solskjaer.
28-sano jirkaan ayaa galay sanadkii ugu dambeeyey ee heshiiskiisa Manchester United, BBC Sport ayaana warinaysa haatan inuu iska diiday heshiis kordhin cusub oo ay u soo bandhigtay kooxdiisa Man Utd.
Warbixinta waxaa kale oo lagu sheegay in Lingard uu ka walaacsan yahay rajada uu ka qabo inuu si joogto ah ula ciyaaro Ronaldo iyo Sancho oo hadda ku jira xayndaabka Kooxda, wuxuuna xor u ahaan doonaa inuu heshiis hordhac ah u saxiixo kooxaha meelo kale bisha Janaayo.
Weeraryahankan ayaa ciyaaray kaliya afar daqiiqo oo horyaalka Premier League ah xilli ciyaareedkan, halka uu dhaliyay labo gool, mid kalana uu caawiye ka ahaa kulankii xulkiisa England uu 4-0 ku xasuuqday Andorra isbuucaan.
Real Madrid oo Kooxaha Man United iyo Barcelona kula biirtay tartanka loogu jiro saxiixa Youri Tielemans